အေးစိမ့်အုံ့မှိုင်းနေတဲ့ ရာသီဥတုနဲ့ လိုက်ဖက်တဲ့ ရှူးရှဲပင်လယ်စာထောင်းကို အခိုးပွင့်သွားအောင် ထောင်းစားကြမယ်!! - For her Myanmar
စားလိုက်တိုင်း ပင်လယ်စာ အရသာတွေ ပါးစပ်ထဲ စိမ့်ဝင်ပြီး ထိရှသွားဖို့ အာမခံတယ်နော်..
မိုးအေးအေးနဲ့ ဘာလုပ်စားရကောင်းမလဲ တွေးတောနေသူတွေအတွက် အစားတစ်လိုင်း မင်မင်ပြန်လည် ရောက်ရှိလို့လာပါပြီ… ဒီတစ်ခေါက်မှာတော့ မင်မင်ခုတလော ဓာတ်ကျနေတဲ့ ပင်လယ်စာ ချဉ်ငံစပ်ထောင်း လုပ်နည်းလေးကို ဝေမျှပေးချင်ပါတယ်.. မိုးတွင်းလို ပင်လယ်စာပေါတဲ့အချိန်နဲ့ ရာသီဥတုအေးအေးမှာ ချဉ်ငံစပ်အရသာ လိုအပ်နေတာနဲ့ လုံးဝကွက်တိကျသွားမှာ အသေအချာပါပဲနော်…
ပင်လယ်စာ ချဉ်ငံစပ်ထောင်းပြုလုပ်ဖို့အတွက် လိုအပ်တဲ့ ပါဝင်ပစ္စည်းတွေကတော့-
ပျားရည် ထမင်းစားဇွန်း (၁)ဇွန်း
ငံပြာရည် ထမင်းစားဇွန်း (၁)ဇွန်း
(၁) ပင်လယ်စာတွေကို သန့်စင်ပြီး ဆားအနည်းငယ်ထည့်ကာ (၁၀)မိနစ်ခန့် ပြုတ်ပေးပါ။
(၂) ပြည်ကြီးငါးနဲ့ ပဲသီးကို အနေတော်အရွယ်လှီး ၊ ခရမ်းချဉ်သီးတွေကို (၈)စိတ်စိပ်၊ သံပုရာသီးကို (၄) စိတ်စိပ် ၊ ငရုတ်သီးစိမ်းတွေကို ခပ်ပါးပါးလှီးထားပါ။
(၃) ငရုတ်ဆုံ ခပ်နက်နက်ထဲမှာ ကြက်သွန်ဖြူ ၊ ငရုတ်သီးစိမ်းနဲ့ ထန်းလျက်ခဲတွေကို မညက်တညက်ဖြစ်တဲ့အထိ ထည့်ထောင်းပေးပါ။
(၄) ခရမ်းချဉ်သီးနဲ့ ပဲသီးတွေကိုပါ ခပ်ဖွဖွထည့်ထောင်းပြီး သံပုရာသီးညှစ်ထည့် ၊ ငံပြာရည်ထည့် ၊ ပျားရည်ထည့်ပြီး ငရုတ်ကျည်ပွေ့နဲ့ မွှေပေးပါ။
(၅) မွှေလို့နှံ့သွားတဲ့အချိန်မှာ ပင်လယ်စာတွေကို ရောထည့်ပြီး မွှေရင်းနဲ့ ခပ်ဖွဖွလေး အရသာဝင်ရုံ ထောင်းပေးပါ။
(၆) အရသာမြည်းကြည့်ပြီး ချိုချဉ်ငံစပ် စိတ်ကြိုက်ဖန်တီးပြီးရင်တော့ ချိုချဉ်ငံစပ် ပင်လယ်စာထောင်းကို အသင့်သုံးဆောင်လို့ ရပါပြီ။
မင်မင်ပြောပြခဲ့တဲ့ ပင်လယ်စာထောင်းလုပ်နည်းလေးက လွယ်ကူလွန်းလှသလို အရသာလည်း ထူးခြားတာမို့ ယောင်းတို့အားလုံး ကျေနပ်သဘောကျလိမ့်မယ်လို့ ယုံကြည်မိပါတယ်။ နောက်ထပ် ဘယ်လိုမုန့်လုပ်နည်းတွေကို ဝေမျှပေးဦးမလဲဆိုတာကို ဆက်လက်စောင့်မျှော်ပေးကြပါဦးနော်….
စားလိုကျတိုငျး ပငျလယျစာ အရသာတှေ ပါးစပျထဲ စိမျ့ဝငျပွီး ထိရှသှားဖို့ အာမခံတယျနျော..
မိုးအေးအေးနဲ့ ဘာလုပျစားရကောငျးမလဲ တှေးတောနသေူတှအေတှကျ အစားတဈလိုငျး မငျမငျပွနျလညျ ရောကျရှိလို့လာပါပွီ.. ဒီတဈခေါကျမှာတော့ မငျမငျခုတလော ဓာတျကနြတေဲ့ ပငျလယျစာ ခဉျြငံစပျထောငျး လုပျနညျးလေးကို ဝမြှေပေးခငျြပါတယျ.. မိုးတှငျးလို ပငျလယျစာပေါတဲ့အခြိနျနဲ့ ရာသီဥတုအေးအေးမှာ ခဉျြငံစပျအရသာ လိုအပျနတောနဲ့ လုံးဝကှကျတိကသြှားမှာ အသအေခြာပါပဲနျော…
ပငျလယျစာ ခဉျြငံစပျထောငျးပွုလုပျဖို့အတှကျ လိုအပျတဲ့ ပါဝငျပစ်စညျးတှကေတော့-
ပြားရညျ ထမငျးစားဇှနျး (၁)ဇှနျး
ငံပွာရညျ ထမငျးစားဇှနျး (၁)ဇှနျး
(၁) ပငျလယျစာတှကေို သနျ့စငျပွီး ဆားအနညျးငယျထညျ့ကာ (၁၀)မိနဈခနျ့ ပွုတျပေးပါ။
(၂) ပွညျကွီးငါးနဲ့ ပဲသီးကို အနတေျောအရှယျလှီး ၊ ခရမျးခဉျြသီးတှကေို (၈)စိတျစိပျ၊ သံပုရာသီးကို (၄) စိတျစိပျ ၊ ငရုတျသီးစိမျးတှကေို ခပျပါးပါးလှီးထားပါ။
(၃) ငရုတျဆုံ ခပျနကျနကျထဲမှာ ကွကျသှနျဖွူ ၊ ငရုတျသီးစိမျးနဲ့ ထနျးလကျြခဲတှကေို မညကျတညကျဖွဈတဲ့အထိ ထညျ့ထောငျးပေးပါ။
(၄) ခရမျးခဉျြသီးနဲ့ ပဲသီးတှကေိုပါ ခပျဖှဖှထညျ့ထောငျးပွီး သံပုရာသီးညှဈထညျ့ ၊ ငံပွာရညျထညျ့ ၊ ပြားရညျထညျ့ပွီး ငရုတျကညျြပှနေဲ့ မှပေေးပါ။
(၅) မှလေို့နှံ့သှားတဲ့အခြိနျမှာ ပငျလယျစာတှကေို ရောထညျ့ပွီး မှရေငျးနဲ့ ခပျဖှဖှလေး အရသာဝငျရုံ ထောငျးပေးပါ။
(၆) အရသာမွညျးကွညျ့ပွီး ခြိုခဉျြငံစပျ စိတျကွိုကျဖနျတီးပွီးရငျတော့ ခြိုခဉျြငံစပျ ပငျလယျစာထောငျးကို အသငျ့သုံးဆောငျလို့ ရပါပွီ။
မငျမငျပွောပွခဲ့တဲ့ ပငျလယျစာထောငျးလုပျနညျးလေးက လှယျကူလှနျးလှသလို အရသာလညျး ထူးခွားတာမို့ ယောငျးတို့အားလုံး ကနြေပျသဘောကလြိမျ့မယျလို့ ယုံကွညျမိပါတယျ။ နောကျထပျ ဘယျလိုမုနျ့လုပျနညျးတှကေို ဝမြှေပေးဦးမလဲဆိုတာကို ဆကျလကျစောငျ့မြှျောပေးကွပါဦးနျော….
Tags: Chilli, Food, Lime, onion, prawn, Recipe, seafood salad